प्रदीप गिरीको प्रश्न– सरकार समाजवाद उन्मुख कि दलालवादउन्मुख ? - Sabal Post
प्रदीप गिरीको प्रश्न– सरकार समाजवाद उन्मुख कि दलालवादउन्मुख ?
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सोमबारको संसदको बैठकमा बोल्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याएर काम दिन सके देशले प्रगति गर्ने बताएका छन् । गिरीले राखेको भनाइको सारांशः
प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर छलफल भएको भन्नुहोला भन्ने लागेको थियो । हलुका कुरा मात्रै भए हावा कुरा मात्रै भए भन्नुभएको मैले पढें । प्रधानमन्त्रीको पीडा वास्तविक नै होला । राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नु त्यति आपत्तीजनक कुरा होइन जस्तो लाग्छ । मेरो पार्टीले त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेको छ । कुनै पनि शब्द प्रधानमन्त्रीको अध्ययन भएको सूचना भएको राजनीतिक जीवनमा कमै देखेको छु । भाषा र शास्त्रमा विभिन्न शब्द हुन्छन् । उहाँ जत्तिको जेलमा बसेको मान्छे उहाँ अर्को गणशमान जस्तो लाग्छ । शब्दमा अभिदा, व्यञ्जना हुन्छन् । यसका बारेमा चाहिँ स्पष्टिकरण दिँदा प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले गुणात्मक हिसाबले गणतन्त्र खोजेका छौं । सादगी भएको राष्ट्रपति खोजेको छ । अगाडि गाडी, पछाडी गाडी, माथि हेलिकोप्टर तल पानी जहाज अवस्था गृहमन्त्रीको समेत देखिने गरेको छ । यो देखेर मानिसहरुले पीडित भएर नै संसदीय व्यवस्था माथि नै आपत्ति जनाएका हुन् प्रधानमन्त्री महोदय ।
त्यसैले चित्त नदुखाउनु हुन अनुरोध गर्दछु । एउटा बुँदामा विपक्षी दलसँग यति राम्रो सहकार्य पहिला भएको थिएन भनिएको रहेछ । तर यति नराम्रो सम्बन्ध कहिल्यै थिएन । कोठा एकै ठाउँमा छ । तर सम्बन्ध राम्रो छैन । त्यसैले एउटाको सिंहदरबार र एउटाको बानेश्वर कोठा राखिए दिए हुन्छ । एक हजार कोषको यात्रा पनि एक स्टेपबाट नै शुरु हुन्छ । एक कदम पर्याप्त हुन्छ । तर कदम कता पूर्व कि पश्चिमतिर ? समाजवादउन्मुख की दलालवादउन्मुख ? वृक्षारोपणलाई विशेष गम्भीरतापूर्वक गरौं भन्छु ।
पानीजहाजको चाहना जनताको चाहना भनेर बुभछन् । आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना बुझ्छन् । बडो खतरनाक हुन्छ । एउटा विमान कम्पनी नै बिजोग छ । पहिला त यसलाई चलाऔं न । हामी पनि यसको जिम्मेवारी लिन्छौं । धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड । जनताको चाहनाको मनोगत पाराले बात नगरौं । चुनौति दिन चाहन्न । यो संसदमा व्हिप नलगाइकन भोटिङ गरौं त । विकास भन्ने शब्द जस्तै प्रगति शब्द छ । विकासलाई तथाकथित मापन हुन्छ । त्यसैले विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला विदेशमा मध्यपूर्वको घाममा काम गरिरहेका जनतालाई फर्काउनु पर्छ ।
यी चीजहरु सिरानी मुनि राखेर सुत्नुस्, भाग्य…
बालिका बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा भारतभर प्रदर्शन
यस्तो छ दाइने शंखको रोचक तथ्य